अनलाइन पत्र संवाददाता प्रकाशित मिति १८ आश्विन २०७७, आईतवार ००:१४
हार्ई आउनु स्वाभाविक प्रक्रिया हो । तर, कहिलेकाहीँ अलि बढी नै हार्ई आउने समस्या हुन्छ । विशेषगरी गर्मी मौसममा मानिसले बढी हाई काढेको पाइन्छ । यसरी बढी हार्ई आउँदा कुनै–कुनै स्थानमा अस्वाभाविक पनि देखिन्छ, जसले मानिसलाई लज्जास्पद गराउँछ । उसो भए किन आउँछ त अत्यधिक हार्ई ? डा. केदार सेन्चुरीले बताएका छन् ः
हार्ई फिजियोलोजिकल मेकानिजम हो । हार्ई आएको अवस्थामा त्यसलाई रोक्नु भने हुँदैन । मज्जाले नै गर्नुपर्छ । हार्ई हाम्रो मस्तिष्कको तापक्रमलाई नियन्त्रणमा राख्ने प्रक्रिया भएको पनि विभिन्न अनुसन्धानले देखाएका छन् । हार्ई गर्दा मस्तिष्कको तापक्रम घटाउने मात्र होइन, अनुहारका मांसपेशी पनि तन्काइदिन्छ । अमेरिकन एकेडेमी अफ स्लिप मेडिसिनमा प्रकाशित एक अनुसन्धानले भने हाई काढ्दा शरीरमा कमी भएको अक्सिजनलाई पनि पूर्ति गर्छ । हार्ईले मस्तिष्कलाई ऊर्जावान् पनि बनाउँछ ।
मस्तिष्कमा थकान बढी भएमा हार्ई काढ्ने समस्या सिर्जना हुन्छ । थकाइका कारण पनि हाई आउने हुन्छ । मान्छे सुत्यो तर गहिरो निद्रामा परेन भने पनि हाई दोहोरिरहन्छ ।
शरीरमा ग्लुकोजको मात्रा कमी वा बढी भएको अवस्थामा हाई आउने गर्छ । विशेषगरी ग्लुकोजको मात्रा बढी भएमा हाई आउने गर्छ । किनभने, ग्लुकोजको मात्रा बढी भएमा आन्द्रा र पेटवरिपरि बढी रक्तसञ्चार हुन्छ । तर, मस्तिष्कमा भने कम हुन्छ । त्यसैले हार्ई आउने समस्या हुन्छ ।
अपचको समस्या भएमा पनि बढी मात्रामा हाई आउने गर्छ ।
मानिस थाकेको वा मन नपरेको ठाउँमा बस्दा, कुरा सुनिरहँदा हाई आउने गर्छ । यसलाई टेक्निकल भाषामा हाइपोथेनिया पनि भनिन्छ । अर्थात्, शरीरमा मस्तिष्क शिथिल भएको अवस्थामा बढी हाई आउँछ । चनाखो भएको अवस्थामा भने यसरी हार्ई दोहोरिँदैन ।
शरीरमा पानीको कमी हुँदा पनि हाई आउने समस्या हुन्छ ।
बढी हाई आउने समस्या भएमा शरीरलाई आराम नपुगेको भनी बुझ्नुपर्छ ।
कुनै–कुनै स्वास्थ्य समस्याका कारण पनि बढी हाई आउने हुन सक्छ । डाइबेटिजका कारण पनि मानिसलाई बढी हार्ई आउने हुन्छ ।
जाडोमा मेथीको साग खानुका फाइदाहरु यस्ता छन्